AHOANA NY FOMBA HAMORONANA TAMBAZOTRA EO ANELANELAN'NY SOLOSAINA ROA? - NETWORK SY INTERNET - 2019
Ahoana ny fomba hamoronana tambazotra eo anelanelan'ny solosaina roa?
Na dia 10-15 taona lasa izay aza, ny fisian'ny ordinatera dia saika lamaody, na dia eo aza ny fisian'ny solosaina roa (na mihoatra) ao an-trano dia tsy mahagaga na iza na iza ... Mazava fa ny tombontsoa rehetra avy amin'ny PC dia avy amin'ny fampifandraisana azy amin'ny tambajotra ao an-toerana sy ny Internet, ohatra lalao amin'ny tambajotra, fizarazarana rakitra, fifindrana rakitra haingana avy amin'ny PC ho an'ny hafa, sns.
Tsy ela akory izay dia "tsara vintana" aho mba hamoronana tambajotram-pifandraisana an-toerana eo anelanelan'ny solosaina anankiroa + "mizara" ny Internet amin'ny solosaina iray amin'ny iray hafa. Ahoana no fomba hanaovana izany (araka ny fahatsiarovana vaovao) dia horesahina amin'ity lahatsoratra ity.
1. Ahoana no hampifandraisana ny ordinatera?
2. Mametraka tambajotra ao an-toerana amin'ny Windows 7 (8)
2.1 Raha mifandray amin'ny router iray
2.2 Rehefa mifandray mivantana + mizara ny fidirana amin'ny Internet amin'ny PC faharoa
Ny zavatra voalohany tokony hatao rehefa mamorona tambajotra ao an-toerana dia ny manapa-kevitra ny fomba hanorenana azy. Ny tambajotra ao an-tokantrano ao an-tokantrano dia matetika ahitana solosaina / ordinatera (2-3). Noho izany, safidy roa no ampiasaina matetika: ny ordinatera dia mifandray mivantana amin'ny cable manokana; na mampiasa fitaovana manokana - router. Diniho ny endri-tsoan'ny safidy tsirairay.
Mampifandray ireo ordinatera "mivantana"
Ity safidy ity no mora indrindra sy mora indrindra (amin'ny vidin'ny fitaovana). Afaka mampifandray solosaina 2-3 (ordinatera) ianao amin'ny fomba toy izany. Amin'izany fotoana izany, raha fara-fahakeliny PC iray mifandray amin'ny Internet, azonao atao ny mamela ny fidirana amin'ny PC rehetra hafa ao amin'io tamba-jotra io.
Inona no ilaina mba hamoronana fifandraisana toy izany?
1. Ny tariby (antsoina koa hoe couvert twisted) dia kely kokoa noho ny elanelana misy eo amin'ireo PC mifandray. Na tsara kokoa, raha vantany vao nividy telegrama nopetahana tao amin'ny fivarotana ianao - izany no izy. Efa misy connecteur amin'ny fifandraisana amin'ny ordinatera amin'ny ordinateran'ny ordinatera (raha hamafisinao ny tenanao dia manoro hevitra aho mamaky:
Etsy ankilany, mila mihaino tsara ianao fa ilaina ny mandefa solosaina amin'ny ordinatera (mifandray). Raha mandray ny cable ianao hampifandray ny ordinatera amin'ny router - ary ampiasao izany amin'ny fampifandraisana PC 2 - ity tambajotra ity dia tsy miasa!
2. Ny ordinatera tsirairay dia tokony hanana karatra amin'ny tambajotra (azo ampiasaina amin'ny solosaina / solosaina rehetra maoderina).
3. Raha ny marina dia izany rehetra izany. Vitsy ny fandaniana, ohatra, ny cable ao amin'ny fivarotana amin'ny fampifandraisana PC 2 dia azo vidiana ho 200-300 roapolo; Ny karatra ho an'ny tambajotra dia ao amin'ny PC rehetra.
Vita fotsiny ny hampifandray ny tariby fitiliana 2 ary hamadika ny solosaina roa ho an'ny fanovana hafa. Amin'ny lafiny iray, raha ny iray amin'ireo PC dia mifandray amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny karatra misy ny tambazotra, dia mila karatra rindrambaiko faharoa ianao - hampiasanao izany hampifandray ny PC amin'ny tambajotra ao an-toerana.
Ny tombony amin'ity safidy ity:
- famoronana haingana;
- fametrahana mora;
- ny fahamendrehan'ny tambajotra toy izany;
- haingana be rehefa mizara rakitra.
- Fitaovana fanampiny manodidina ny trano;
- Mba hahazoana fahafahana miditra aterineto - ny PC izay tena mifandray amin'ny aterineto dia tokony hiverina foana;
- ny tsy fahafahana mahazo fidirana amin'ny fitaovana finday finday *.
Famoronana tranonkala iray mampiasa router
Ny router dia boaty kely iray izay manamora ny famoronana tambajotra an-toerana sy ny fifandraisana aterineto ho an'ny fitaovana rehetra ao an-trano.
Ilaina ny manamboatra ny router indray mandeha - ary ny fitaovana rehetra dia afaka miditra avy hatrany amin'ny tambajotra ao an-toerana sy miditra aterineto. Amin'izao fotoana izao any amin'ny magazay dia mahita router maromaro marobe, manoro hevitra aho hamaky ilay lahatsoratra:
Ny solosaina finday dia mifandray amin'ny router amin'ny alàlan'ny cable (matetika dia misy cable 1 foana miaraka amin'ny router), ny finday sy ny fitaovana finday dia mifandray amin'ny router amin'ny alalan'ny Wi-Fi. Ny fomba fampifandraisana PC amin'ny router dia azo jerena ato amin'ity lahatsoratra ity (mampiasa ny ohatra amin'ny router D-Link).
Ny fametrahana tambazotra toy izany dia nofaritana amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ity lahatsoratra ity:
- Raha vao manangana ny router, ary ny fidirana amin'ny Internet dia ho amin'ny fitaovana rehetra;
- tsy misy filalaovana fanampiny;
- fametrahana fidirana amin'ny fidirana amin'ny aterineto amin'ny fitaovana samihafa.
- fandaniana fanampiny ho an'ny famerenana ny router;
- Tsy ny router rehetra (indrindra fa ny sokajy ambany vidiny) dia afaka manome haingana be ao amin'ny tambajotra ao an-toerana;
- Ny mpampiasa tsy dia za-draharaha dia tsy mora foana ny mampifanaraka izany fitaovana izany.
Aorian'ireo ordinatera mifandraika amin'ny iray amin'ireo safidy (na mifandray amin'ny router izy ireo na mifandraika mivantana) - mila manamboatra Windows ianao hamita ny asan'ny tambajotra ao an-toerana. Andeha hojerentsika ny ohatr'i Windows 7 OS (OS malaza ankehitriny, ao amin'ny Windows 8, ny toerana dia mitovy + afaka mahafantatra tsara ny tenanao amin'ny
Alohan'ny hametrahana izany dia alefaso ny fanesorana ny firewall sy ny antivirus.
Rehefa mifandray amin'ny router iray - ny tambajotra ao an-toerana, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, dia manangana azy. Ny asa lehibe dia mihena amin'ny fametrahana ny router. Ireo modely malaza dia efa navoaka tamin'ny alàlan'ny pejy bilaogy teo aloha, eto ny rohy sasany etsy ambany.
Mametraka ny router:
Aorian'ny fametrahana ny router dia afaka manomboka manangana ny OS ianao. Ary amin'izany dia ...
1. Mametraka ny andian-tsoratra sy ny anaran'ny PC
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mametraka anarana iray manokana ho an'ny solosaina tsirairay ao amin'ny tambajotra ao an-toerana ary mametraka ny anarana nomeny ho an'ny vondrona.
1) Toeram-pitsaboana 1
Vondron'asa miasa: WORKGROUP
2) Toeram-pitsaboana 2
Raha te hanova ny anaran'ny PC sy ny vondron'olona, ​​dia alefaso eo amin'ny sehatry ny solosaina amin'ny adiresy manaraka: Control Panel System and Security System.
Ankoatra izany, ao amin'ny tsipika havia dia fidio ny safidy "rafitra rafitra fanampiny", tokony jerena ny varavarankely izay mila manova ny fepetra ilaina.
Windows properties 7
2. Fandefasana ny File sy Printer
Raha tsy manao an'ity dingana ity ianao, na inona na inona ordinatera sy antontan-taratasy zarainao dia tsy misy afaka miditra amin'izy ireo.
Mba hahafahanao mizara ny fanontam-pirinty sy ny lahatahiry, mandehana any amin'ny sehatry ny solosaina ary sokafy ny sehatra "Network and Internet".
Avy eo, mila mankany amin'ny "Network and Sharing Center" ianao.
Ankehitriny, tsindrio ny "fanovana fiovaovana fifampizarana" ao amin'ny tsanganana havia.
Alohan'ny ahitanao sary maro samihafa 2-3 (ao amin'ny pikantsary ambany etsy ambany 2: "Home or Work" ary "General"). Ao amin'ireo tontonana roa ireo dia tsy maintsy mamela ny rakitra sy ny fizaràna ny fizarana + ny fiarovana ny tenimiafina. Jereo eto ambany.
Ampifanaraho ny fizarana.
Safidy fifampizarana misimisy kokoa
Rehefa vita ny fanovana, tsindrio ny "save changes" ary atsangano ny solosaina.
3. Mizara ny rakitra misokatra
Amin'izao fotoana izao, raha te hampiasa solosaina amin'ny solosaina iray hafa, ilaina ny mizara ny lahatahiry misy azy (mizara azy ireo).
Ataovy mora - ao amin'ny klicks 2-3 miaraka amin'ny totozy. Sokafy ny mpikaroka sy ny bokotra havanana amin'ny tranokala izay te-hanokatra. Ao amin'ny menu context, dia mifidiana "Mizara - ny vondron'olona (vakio)".
Avy eo dia hijanona hiandry eo amin'ny 10 ka hatramin'ny folo segondra izy ary ny tranokala dia hiseho amin'ny sehatra ho an'ny daholobe. Etsy andaniny, hahita ny ordinatera ao amin'ny tambajotra an-trano ianao - tsindrio ny bokotra "Network" ao amin'ny tsipika havia amin'ny mpikaroka (Windows 7, 8).
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny dingana natao hametrahana ny tambajotra ao an-toerana dia tena mitovy amin'ny dikan-teny teo aloha (rehefa mifandray amin'ny router). Mba tsy hamerenana ireo dingana izay averimberina dia hanisy marika eo amin'ny fononteny aho.
1. Mametraka ny anaran'ny solosaina sy ny vondrona (toy izany, jereo eto ambony).
2. Mametraka ny antontan-taratasy sy ny fizarana fanontam-pirinty (toy izany, jereo eto ambony).
3. Mametraka ny adiresy IP sy ny vavahady
Ny fametrahana dia mila atao amin'ny solosaina roa.
Andeha isika hanomboka ny fananganana amin'ny solosaina lehibe mifandray amin'ny Internet. Mankanesa any amin'ny tolotra fanaraha-maso amin'ny: Control Panel Network sy Internet Network Connections (Windows 7 OS). Ankoatra izay dia ahitantsika ny "fifandraisana eo amin'ny tambajotra ao an-toerana" (mety tsy mitovy ny anarana).
Avy eo dia mandehana any amin'ireo toetra mifandray amin'io fifandraisana io. Avy eo dia hitantsika ao amin'ny lisitry ny "Protocol Internet Protocol 4 (TCP / IPv4)" ary mandehana any amin'ny faritra misy azy.
Avy eo midira:
Ny subnet dia 255.255.255.0.
Vonjeo ary mialà.
Mandehana any amin'ny sehatra fitetezana: Control Panel Network sy Internet Network Connections (Windows 7, 8). Ampifanaraho amin'ireto mari-pamantarana manaraka ireto (toy ny setrin'ny ordinatera 1, jereo eto ambony).
Ny subnet dia 255.255.255.0.,
default fidirana -192.168.0.1
4. Mizara ny Aterineto Aterineto ho an'ny Computer Faharoa
Ao amin'ny solosaina fototra mifandray amin'ny Internet (laharana 1, jereo eto ambony), midira ao amin'ny lisitry ny fifandraisana (Control Panel Network and Internet Network Connections).
Avy eo, mandehana any amin'ny tranon'io fifandraisana io amin'ny alalàn'ny fifandraisana Internet.
Avy eo, ao amin'ny tabilao "Access", avelantsika ireo mpampiasa hafa ao amin'ny tambajotra hampiasa izany fifandraisana amin'ny Internet izany. Jereo ny sary etsy ambany.
5. Sokafy (mizara) ny fifampizarana misimisy amin'ny lahatahiry (jereo eo ambony ao amin'ny faritra raha manangana tambajotra ao an-toerana rehefa mampifandray amin'ny router).
Izay ihany. Ny fahombiazan'ny LAN sy ny fahombiazana rehetra.